पानी रिक्त स्थान सधैं मान्छे आकर्षित र पौडी उहाँलाई प्रयोग सुविधाहरु को एक किसिम सार्न। तपाईंको आफ्नै हातले काठ डुङ्गा आवश्यक उपकरण, सामान र सामाग्री संग घर मा निर्मित गर्न सकिन्छ। पहिलो डुङ्गा आदिम छिल प्रविधि एकल रूख ट्रंक उपयुक्त आकार बनाइएका थिए।
यो विधि सामाग्री र ठूलो प्रयासको एउटा अत्यन्तै अदक्ष प्रयोग द्वारा विशेषता छ। थप उन्नत प्रविधि र कम घाटा एक डुङ्गा कसरी निर्माण गर्ने? विस्तृत विवरण धेरै मोटा र जो सामान्य सिद्धान्त वर्णन र प्रक्रिया नजिकिंदै यो लेख, को स्कोप परे देखिन्छ। यो एक विशेष डिजाइन आधारित गरिनेछ पानी प्रतिरोधी प्लाईवुड।
कार्यशाला उपकरण र आपूर्ति
पौडी लाउने अर्थ - लामो प्रक्रिया, र यो घर भित्रका खेती सिफारिस गरिएको छ। पर्नसक्ने प्रभाव बच्न आफ्नो टाउको भन्दा एक छत सौर विकिरण को काम मा प्रयोग सामाग्री र वर्षा। कामको लागि हामी आवश्यक:
हथौडा र छिनो।
मुख्य शरीर सामाग्री विशेष प्लाईवुड6मिमी मोटी छ, र निर्माण गर्न poduklyuchin, बैंकहरू र keel बोर्ड दृढ काठ आवश्यक छ। साथै, तपाईंलाई एउटा विशेष क्लिप वा मुद्दा, साथै पुटीन र आवश्यक हुनेछ पनरोक रंग।
तयारी र काटन सामाग्री
नाउ दुई चरणमा आफ्नै हातले निर्माण र काम एक प्लाईवुड पाना को काटन सुरु। चित्रहरू workpiece हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, यो दुई तरिकामा गर्न सकिन्छ। कम्प्युटर र आलेखक: पहिलो विशेष उपकरण प्रयोग समावेश छ। एक एक को मात्रा मा ढाँचा प्रिन्ट गर्नुहोस्। गत्ता देखि कैंची टेम्पलेट संग बाहिर कटौती र बस प्लाईवुड को एक पानामा यो राख्दै एक आकृति मा छवि अनुवाद।
दोस्रो embodiment मा, ढाँचा समानान्तर रेखाहरू rascherchivaetsya र एक अनुरूप वृद्धि संग कदम मा workpiece हस्तान्तरण गरिएको छ। डुङ्गा सबै भागहरु एक बिजुली पहेली संग ध्यान दिएर कट छन्। तालिका वा workbench मा राम्रो प्रदर्शन गर्न सञ्चालन। उपकरण यसलाई अत्यधिक शक्ति लागू बिना लाइन मा कडाई बढुवा पर्छ भनेर नबिर्सनुहोस्।
विधानसभा पौडी हालतमा
आफ्नो हातले प्लाईवुड डुङ्गा तल्ला वा अन्य कुनै पनि सपाट र ठोस सतह मा रहेको छ। दायाँ र बायाँ पक्ष र धनुष को कडी भाग को आकृति को आधार संलग्न गर्न। जंक्शन विशेष Clamps वा पातलो र बलियो yarns को माध्यम गरेको छ। जोइन्टहरूमा ध्यान Polymeric टेप भित्र र बाहिर चिपके। शरीर को आधार तयार छ।
अर्को, आफ्नो हातमा एक काठ डुङ्गा धनुष, पिछाडी र स्थापना बैंकहरू को ठाउँमा स्थापित शक्ति को एक सेट को माध्यम द्वारा बलियो बनायो। को फ्रेम ड्राई स्ट्रिप्स बनाइएका र टास्ने सम्बन्ध गाँसिसकेको द्वारा आवास गर्न सामेल छन्। अस्थायी साधन थप गर्ने गोंद को पूर्ण सुकाउने लागि समय दिनुहोस् र पुटीन र पेंट लागू लागि जिम्मेवार प्रक्रिया सुरु।
बनाउने डुङ्गा धेरै समय लिन, तर ज्ञान र अनुभव को संग्रह रूपमा सेवा गर्नेछन्। समाप्त उत्पादन पानी निकटतम शरीर मा परीक्षण छ, र यदि त्यहाँ प्रविधिको कुनै सकल उल्लंघन थिए, यो एक लामो समय को लागि आफ्नो मालिक सेवा गर्नेछन्। आफ्नै हात डिजाइन र निर्मित आफ्नो कौशल को विकास मा अर्को तार्किक चरण, एउटा वास्तविक मोटर डुङ्गा हुनेछ।
घरमा आफ्नो हातमा Airbrush: डिजाइन र निर्माण
कसरी आफ्नो हात संग तिल crickets लागि पासो बनाउन? Medvedkov सामना गर्न सबै तरिका
कसरी आफ्नो हात संग एक गारलैंड बनाउन: निर्देश, चित्र
मानव ऊतक को युग्मन
स्वामित्व हो ... स्वामित्व सफ्टवेयर
बारम्बार खोक्रो साँस। बच्चा को खोक्रो साँस
वर्षा ... यी साना थोपा के हुन्?
जहाँ जनवरी मा समुद्र मा आराम गर्न? जनवरी सस्ती मा समुद्र मा आराम